Kukwapura Nyini yechiMunambiya kuno kuHwange – Vanoda Zvinhu
Kukwapura Nyini yechiMunambiya kuno kuHwange
· Updated January 10, 2016
Kubvira pandakaenda kunoshandira Hwange handina kumbenge ndawana musikana wekurara naye manje bambo mukati umu vanga vogara vachicomplainer vachitsvaga zvinhu zvavo. Ndakambotsvaga ivo vanamai muponesi ava kumabhawa uku nekunzvimbo dzinomira matrucks iwo magonyeti anenge akazara muHwange. Ndakadriver mota yangu husiku chaihwo ndichitsvaga asi hapana kana wandakaona aiva ari nanewo vaingovawo vakadzi njee vamwe vacho vaitova nemapundu muviri wese kana maspots eblack kumeso nemaoko. Ini hangu handisi smart but apa ndakaona kut kuita chimhandara maoko zvaiva nane. Ndakadzokera hangu kumba ndikarova hangu yandanga ndajaira.
Zvino manje rimwe zuva ndakaona chisikana chaiva nemagaro mahombe zvekut chaita senge chirikuremerwa nawo apa chine tumazamo tudiki twakamira kut twii. Pameso aisashoreka hake asi handina kumbozvitarira. Apa ndanga ndagara ndine shungu dzekumbonzwawo vasikana vekuno. Ko pandaigara Harare ndaiudzwa kut vasikana vekuHwange vazhinji vacho vanobva munaZambezi umu vanonzi maNambiya vanonaka zvekuti ukamusvira unokanganwa zita rako nekunakirwa. Saka pfungwa iyi pandakaona izvi ndakabva ndati nhamo yangu yekusvira ruoko yazopera to make it worse aiva muNambiya futi ndikati hekani waro nyoro ndopinda chete apa.
Ndakamuudza kuti ndakuda mwanasikana akadaira hakeka1 kwakutotanga kukumbira mari yekugadzirwa musoro ndikat marii zvikanzi $5 yekutenga madreads ndikat uchaisvirirwa mari iyoyo. Ndakati sha uuye kuzondiona mangwana haana kuramba ndikat wagona mangwana acho ndakasvika kakatondimirira ndichibva kubasa ndikati gud apa anga akapfeka kaskirt kamini kejini, nekatop kepink kaiva netambo dzaisungwa pamashoulders apa apa anga asina bra futi, zvokut ndakaona minyatso yakabaya katop kake yakanatsomira ndikat hey ndezvangu zvese here izvo. Ipapo bambo vakabva vasimuka zvebasa chaizvo ndakamuti pinda hako uone mumba mangu akabva apinda, manje mumba mangu mu 1 room zve akabva asvikorara akatsigira musoro wake neruoko apa gokora rakabaya mubhedha paedge yemubhedha ndikati aiwa babe enda pakat apa kut tikwane ndikat hey wairasa mumba mawapinda umu uchasvirwa chete.
Ndakatanga kutaura nyaya dzanga dzisina kana direction ndobva ndamut huya uise musoro wako pachest pangu apa akabva auya nemusana chaiwo i thnk paakanditsambirira pakat pemakumbo apa akanatsonzwa mboro yangu yakamira akangoitsambirira zvakadaro ndikabva ndaziva kut shasha yazvidawo izvi. Ndakatanga kuda kubata tumazamo tuya mwanaa wevanhu akatanga kubvisa maoko angu pamazamo pake akanyarara ndikati hoo hausat watanga ndakazama kukisa mwana akanzvengesa musoro ndikat hiya inga makata chaiwo. Ndakabva ndatanga kubata guvhu rake mwana akaterera ndikati hekani waro haundizivi mazamo acho tosiyana nawo kana ukadaro. Ndakatanga kunyerekedza paguvhu ndichifambisa zvigumwe zvangu paguvhu paya nepaline rinodzika kuchoya chake, ndakatanga kunzwa hana yake yachinja heart bit ndikat zvenge zviri kuita. Ndikat ndidzokere kumazamo mwana wevanhu akabvisa maoko angu pamazamo zvekare ndikat hey hausat waibva ipapo akabva apiduguka ndokurara nedumbu ini ndobva ndarara ndakamutarirawo ndikatanga kubata kumusana kwake iye akaisawo maoko ake kumusana wangu ndakatanga kupuruzira musana bhijana bhijana zviri soft ndikaona shasha yateerera ndikati yes now ndichakusvira chete ndakaramba ndichidzikisa maoko angu kusvika panotangira magaro apa ndikatevedza rukoronga hwespinal cord kusvika ndasvika pakati pemagaro ndikatanga kufambisa zvigumwe zvangu two ndichiita sendinoda kutupinza pakat pemagaro asi ndisingapindi mukat ndaka ndanzwa heymunhu akubatirira ndikat zvakuita.
Mwana uyu aiva netuvhudzi twaiuya nechekuno kumusana uku tuchibuda parukoronga rwemukosho ndakatanga kufambisa zvigumwe zvangu bhijana bhijana zviri soft ndakaramba ndichidaro ndikanzwa munhu avakundisvededza kwaari apa avakupinza ruoko rwake kumagaro angu ndikat yah shasha yaibva. Ndakachishandisa ruoko hwangu hwekwaleft kuenda kuzvidzva uku ndikatanga kuhufambisa zviri soft muzvidzva umu ndikaona munhu haachabat ruoko hwangu ndikat zvavakuita. ndakapinza ruoko hwekwaleft mukat meskirt ndikaikwidza ndikaona shasha yava kutosimukira kut skirt inatsokwira ndikat waibva manje. Ruoko hwekwaryt hwakaramba huchitambira paspinal cord ipapo pamagaro musvikoronga svemukosho isvosvo bt kuri kumusoro. Ndakaswededza left hand yangu kumusoro uku ndokusvika pajunction panoperera magaro pachitanga zvidzva ndakatanga kufambisa zvigumwe zvangu ipapo ndichiita sebofu riri kutsvaga coin yararasa ndakanzwa manje munhu achinditi mbamba apa gumbo rava kusimudzwa richiiswa pamusoro peangu kwakutanga kundipushira kwaari negumbo ndikat haiwa yaibva . ndakaramba ndichidaro mwana akashaya chekubata avakufemra pamusoro semunhu ane asyma ndakaramba ndichidaro ndobva munhu atanga kuzvibvisa pant ega ndikat gud ndakazomubatsira kubvisa pant kubva ashadabura ndikati ha waibva. ini ndakabva ndachiribata beche chairo hey ranga richitosina zvaro, ndakangobata kabinz kake mwana akatanga kuzvongonyoka senyoka ndikat gud ndakabvisa hembe dzangu mwana akangotarira zvekubira kumboro yangu akabva ati pfeka condom ndikat handina. zvikanz ukandimitisa ke ndikat dont worry, ndikat ngatiregdze bcz handina condom mwana akabvuma nemusoro achibva ataura kuti isa but utundire panze, ndikati mwana uyu anzwa nekuda mboro condom hachina basa naro.
Ndikat rega ndikuite tocha chaiyo ndakatora mboro yangu ndikatanga kukwiza up and down pabeche rake and beche rake raipisa zvakandishamisa zvekut ndakanzwa musoro kutema chaiko. mwana akatanga kushinyira achibata mboro yangu kut ipinde ini ndakaramba ndichidaro bcz ndkanzwa kut ndanga ndapera basa kare ndakatora towel rangu ndikatundira patowel hey kupisa kwebeche iri kwakanditenderedza musoro kekutanga kutunda ndisat ndasvira muupenyu hwangu hwese.
Ndakabva ndati ngatichirega ndichida kuona kut anoita sei zvikanaz isa isa kani ndiwe wazvitanga isa kani ndikati ibhoo ndakapinza chigumwe hey beche remwana uyu rakandishamisa ndakafunga kut ivirgin bcz panga pane zibundu ranga raka zvimba rakavhara beche ndakabata bundu riyandikanzwa inga rine nyama inenge iri rough rough kana kut ine magriii griii ndikaziva kut ndiyo g spot yakazvimba nekuda mboro ndakangobata bhijana mwana akaridza kamhere ndikat gud. Apa ndaiita madelayng tactics kut mboro isimuke akabva andidhonzera padhuze achibata magaro angu ndakangoiti mvoo bhijana mubeche ndikanzwa kakushinya iye akabva aridza mhere chaiyo ndakazoibaira yese hey ndakanzwa senge pane zvinhu zvakabata mboro yangu hey mukat beche rine maoko ndinobvuma nekuti ndainzwa kunatsobatwa mboro chaiyo zvekuti pandaikoira ndainzwa kufamba nemukat menyama ine tumaripples kana tumaridge ndakanakirwa zvandisingagoni kutsanangura. uku mwana aiita chikapa changa chisina kunyanyisa ndikat mira uone. Zvandakamboudzwa zviya kut ita kut maoko ave busy ndakati rumwe ruoko pakabhinzi rumwe pazamo rurimi pane rimwe zamo apa ndichikoira chete hey mwana akabowa chaiko akatunda, ndopaakaita zvekuvhunduka chaiko achiti wandimitisa ndikat handisat ndatunda…. takazopedza hedu mwana akaramba akarara kwe abt 30 mins asingadi kutaura achiita semunhu asina simba ndanga ndava kutyawo.
Hama dzangu musadherere maNambiya!
Next story Nyoro nekumashure ini nemukadi wangu tiri muden medu zvedu
Previous story Ah Molly anga andinetsa!